Kimani Maruge oo noqday ardaygii ugu waynaa - BBC Somali
Kimani Maruge oo noqday ardaygii ugu waynaa
Maareeyaha dhanka xiriirka ee shirkada Google ee bariga iyo wadamada afka faransiiska ku hadla ee qaarada Afrika, ayaa sheegtay in Mr Maruge, oo fasalka koowaad u fadhiistay isaga oo 84 sanno jir ah, uu ahaa nin aan caadi aheyn oo hamiga uu u hayo waxbarashada noloshiisa oo dhan ay tahay tusaale iftimiinaya oo muujinaya muhiimada tacliinta.
Miss Ooko ayaa sheegtay in sawirka Google uu u sameeyay ninkan ay dhiira gelineyso carruurta in ay helaan waxbarasho, sidoo kalana ay xusuusineyso dadka waaweyn in aysan ka daahin waxbarashada oo ay weli wax baran karaan.
Mr Maruge ayaa caan noqday kaddib markii uu ku biiray dugsiga hoose/dhexe Kapkenduiywo, oo kuyaal magaalada Eldoret ee galbeedka Kenya bishii Janaayo 12kii sanadkii 2004-tii, isaga oo da'diisu ay aheyd 84 sano.
Waloow uusan heysan xiligaa warqada dhalashada oo cadeyneysay dada uu jiray, Mr Maruge ayaa la rumeysan yahay in uu dhashay 1920s.
Mar uu ka hadlayay xilligaasi sida uu ugu biiray iskuulka ayuu wuxuu sheegay in go'aankiisa uu dhiiri geliyay, markii ay dowladda ku dhawaaqday waxbarashada bilaashka ah ee dugsiyada hoose oo dhan.
Sanadkii 2005 ayaa lagu casuumay in uu ka hadlo shirka Qaramada Midoobay ee hormarka kunka sano ee ka dhacayay New York, si uu uga hadlo muhiimada ay leedahay waxbarashada bilaashka ah.
Waxa uu bishii August 2009 u dhintay cudurka kansarka oo uga dhacay caloosha.
Sawira gacmeedka Google ayaa waxa ay yihiin kuwa lagu xuso culumada saayniska ee magaca leh, fanaaniinta iyo dadka waxyaabaha hormarka ah sameeyay taariiqda.
Shirkada Google ayaa sheegay in ay ku faraxsantahay in ay habkan ku muujiso qof Kenyan ah oo u istaagay arrintan muhiimka ah.